General izwi rekugadzirira kana zvishandiso zvinonyatsotora mamwe mamorekuru egasi, anoshandiswa kuwana kana kuchengetedza vharumu, uye kuchenesa magasi.
Chinese zita: zirconium aruminiyamu chiwanikwa upfu, zirconium aruminiyamu 16 getter Usachidana icho: A degassing mumiriri
Usage: Inoshandiswa kuwana nekuchengetedza vacuum, nezvimwe
Zirconium iron isimbi yesimbi inoumbwa ne zirconium uye iron, silicon, aluminium nezvimwe zvinhu. Iyo zirconium iron inoshandiswa mukugadzira simbi ndeye zirconium ferrosilicon, ine Zr15% ~ 45%, Si30% ~ 65%. Chigadzirwa chinogadzirwa nealuminiothermic nzira inonzi zirconium iron nekuti ine aruminiyamu, iine Zr> 15%.
Cobalt aruminiyamu chiwanikwa
CAS Nhamba 11114-55-9
Iyo molecular kurema kwe85.9147
Kodhi yekufambisa yezvinhu zvine njodzi: UN3089
Semhando yepamusoro tembiricha uye ngura inodzivirira zvinhu, aruminiyamu chromium chiwanikwa upfu CrAl anoshandiswa zvakanyanya pamusoro pekupfeka, simbi yekupfeka uye mamwe minda yeakanyanya tembiricha chiwanikwa, ceramics, nezvimwe.
Vanadium aruminiyamu chiwanikwa rudzi rwemberi alloy zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya mumunda weaerospace. Vanadium aluminium alloy is a intermediate alloy ine hushoma hunyoro hwe1600 ℃ (inosanganisira V40%). Inonyanya kushandiswa sechinhu chinowedzera che titanium alloy, superalloy uye mamwe akakosha alloys.
Titanium alloy isirivha-chena simbi, iyo ine akawanda akanaka maitiro. Pa4.54g / cm3, titanium iri 43% yakareruka kupfuura simbi uye inorema zvishoma pane magnesium, inozivikanwa simbi yechiedza. Simba remishini rinenge rakaenzana nesimbi, rakasimba zvakapetwa kaviri sealuminium uye rakapetwa kashanu pane magnesium. Titanium yakanyanya kupisa tembiricha, inonyungudika poindi 1942K, yakakwira kupfuura goridhe rinosvika 1000K, rakakwirira kupfuura simbi ingangoita 500K.
Chromium-tungsten alloy ine yakaderera kabhoni zvemukati uye yakadzika kuomesa, asi mushure mekupura uye kudzima, kuomarara kwepamusoro uye kupisa kwemafuta kunowedzera zvakanyanya, yakazara mechina zvivakwa zvakanaka, uye kwakanyanya kukanganisa kuomarara kunogona kuwanikwa. Cr - W alloy ine kukwirira kwakanyanya uye yakashata yekupfeka kusagadzikana pasi peanopfeka mamiriro ekupfeka.
Zirconium - mhangura alloy ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo yezvinhu zvekufambiswa kwedunhu nekuda kwekuita kwayo kwakanaka uye nekupisa kwekushisa. Kana switch yekuchinjanisa ikabvisa dunhu, arc inoguma inoisa mutoro wakakura pane izvo zvinhu, zvinova zvinoita yakanyanya-tembiricha chromium.
Semhando nyowani yekuchengetedza hydrogen uye zvinhu zvinopisa, Zr30Ni70 alloy powder ndeyechipiri chete kune Zr poda uye inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri emauto, kuchera uye zvigadzirwa zvemagetsi.Zr30Ni70 alloy powder sechinhu chitsva chekupisa kutsiva Zr upfu ndiyo yekuvandudza ikozvino maitiro ,